Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: ONLF Kama Leexanin Tubtii Halganka Ee Aayo-katashiga – By: Xaaji M/rashiid
Maqaal: ONLF Kama Leexanin Tubtii Halganka Ee Aayo-katashiga – By: Xaaji M/rashiid
Sida la ogyahay waxaa Geeska Afrika sanooyin farabadan kasocday dagaal hubaysan oo uu gadhwadeen ka ahaa Ururka gobanimo doonka ah eed wada garaneysaan. Dagaalku wuxuu xambaarsanaa hadaf cadowga iyo naasixuba wada ogyihiin, kaasoo ahaa in umada soomaaliyeed ee ku hoos jirta Itoobiya laga xoreeyo iyadoo loo sii marayo in la waydiiyo waxa ay rabaan?
Waxaa iga afeef ah, Taageerayaasha halganku way fahansanyihiin meesha wax marayaan, laakiin waxaa jira dad qadiyada ka foorara balse markay wax soo kordhaan soo anfariira, kadibna warkii siday jecelyihiin u dhiga.
Insaanku sidiisaba tusaalaha ayuu wax ku fahmaaye wali ma gashay safardheer oo lug ah. Ogoow dhulka waxba isaga dan ma’aha oo waa kala nooc. Sidaad usocoto waxaad mareysaa dhul Qodaxda noocyadeedu ay dhasha dhigatay, waxaa kale ood mareysaa dhul dhagaxa iyo qoofalku isla mayracanayaan, waxaa kale ood mareysaa dhul boodhku sanka iyo dhagaha kaa buuxinayo, waxaa kale ood mareysaa dhul hal geed ood hadhgasho aan lahayn, waxaa kale ood mareysaa dhul qarjuun ah ood raadineyso meel aad madaxa kala dusto, waxaa kale ood mareysaa dhul abaari ka oogsatay oo qorraxdu ku solayso, waxaa kale ood mareysaa dhul qabow oo wadno gariir kugu dhacayo. Waxaa intaas oo dhan kuu dheeraan kara cabsi adigoo isleh maka badbaadi doontaa Dakanooyinkii reerkiinu galay?
Akhristayaal haduu Ruux masaafur ahi intaasoo hagardaamo ah marayo maxaad umalayn urur 24 sano dagaal kula jiray, dadka aduunka ugu dhaqan xun oo ahaa Tigree Ilma Woyaane oo noloshoodu ku saleysan tahay jalaafo iyo uus xabaalid joogto ah oy ku hayaan dadka xaq u dirika ah iyo shucuubtooda. Halganka ONLF wuxuu soo maray marxalado aad u kala duwan oon maskaxdu wada qaadi Karin.
Waxaa kamid ah marxaladaha halista ahaa markay abaartu ku habsato dadkii halganka taageeri jiray bal qiyaas ruux waloowba maxaad umaleyn in ciidanka jabhaddu ku noolaa? Waxaa xusid mudan in cadowgu waqtigaas uu si aad ah u farxayay isagoo naawilaya inay jabhaddu kala carari doonto!.
Marxaladda hadeer la joogo waxay kamid tahay marxaladaha ONLF iyo halgankeedu marayo, waxaana hubaal in laga gudbi doono. Waa marxalad ay qolo waliba danteeda ka dhex aragtay, isla markaana ay ku hawlantahay inay fursadan ka faa’iideysato.
Dadka qaar baar ku doodaya Itoobiya xeelad bay wadataa, taasoon kaga jawaabi lahaa, adiga maxaa xeeladda kuu diiday? Hadii dhanka kale laga eego ma la odhan karaa ONLF hadafkii way ka leexatay? Jawaabtu waa MAYA, sababkoo ah mahayno wax arinkaa cadeynaya oo qoraal ama hadal ah.
Taa badalkeeda waxaa la hayaa cadeymo muujinaya in Ururku ku taaganyahay hadafkii loo aas,aasay. Ururku wuxuu leeyahay siyaasad gaamurtay oo uu ku wajihi karo xaalad kasta oo soo dardarta!
Run ahaantii waxaan ku qanacsanahay isku filaanshaha siyaasadeed ee ONLF mana filayo inay wax ka badalayaan hadalada ay buufinayaan dad laga yaabo inay leeyihiin dano gaar ah ama kanaxaya guulaha Jabhadda.
Waxaa muhiim ah inay bulshadu ku mashquusho is abaabulka iyo horay u socodka, iskana ilaaliyaan inay badiyaan jaleecada iyo gaar daymoodka, taasoo keeni karta inay kufaan!
Isku soo duuboo xaajadan taagani waa curdan, balse mafilayo in shacabka soomaalida ogaadenya lagu fulin doono wax laga diiday, Hayle Salaase, Mangiste iyo Meles.